विद्यार्थीलाई कस्तो गृहकार्य दिने ?
गृहकार्य कक्षाकोठामा गरिने क्रियाकलापको अभिन्न अंग हो । कक्षाकोठामा निर्माण भएको सैद्धान्तिक धरातलमा व्यावहारिक र यथार्थ संरचना निर्माण गर्ने वा छोटो समयको स्मृतिमा रहेका सैद्धान्तिक ज्ञान एवं सूचनालाई प्रयोगात्मक क्रियाकलापद्वारा लामो समयको स्मृतिमा सुरक्षित गर्ने काम गृहकार्य भएकाले यसलाई समग्र सिकाइ प्रक्रियाको परिपूरकसमेत मानिन्छ । शिक्षकको प्रत्यक्ष निर्देशनमा समूहमा रहेर गरेका कार्यको प्रभाव वैयक्तिक अनुभव र अनुभूतिमा ढाल्ने वा सैद्धान्तिक सिकाइलाई आफैंले प्रयोग गरेर पुनर्बल प्रदान गर्ने काम गृहकार्यले गर्ने भएकाले जहिले पनि यो मननयोग्य र सिर्जनात्मक हुनुपर्छ भनिन्छ ।
नेपाली परिवेशमा गृहकार्यप्रतिको अवधारणा समान पाइँदैन । यसैले विद्यालयपिच्छे अझ शिक्षकपिच्छे गृहकार्यको उद्देश्यगत एवं प्रयोजनपरक बुझाइ फरक–फरक देखिन्छन् । गृहकार्यको प्रकृति निर्धारणमा वर्तमान सामाजिक परिवेश र अभिभावकहरूको व्यस्त जीवनशैलीको समेत प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ। शिक्षा– समाज परिवर्तन र व्यक्तिको सामाजिकीकरण दुवै प्रयोजनका लागि हुने भए पनि गृहकार्यको प्रभावकारिता, सिकाइ प्रक्रियामा पुग्ने सहयोग एवं बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका दृष्टिले अभिभावकभन्दा शिक्षक नै बढी जिम्मेवार देखिन्छन् । शिक्षकको शिक्षा वा सिकाइप्रतिको अवधारणा र आधुनिक शैक्षिक प्रविधिप्रतिको चेतनास्तरका आधारमा गृहकार्यको प्रयोजन र प्रकृतिगत भिन्नता स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । काठमाडौंलाई आधार मानेर पंक्तिकारले गरेको अध्ययनअनुसार गृहकार्य दिनाका कारण, गृहकार्यको प्रकृति एवं उद्दश्यबीच तादात्म्य कमै पाइएको छ ।
पाठ्यपुस्तक पढाउनु अनि पाठ्यपुस्तकमै रहेका अभ्यासमध्ये केही छानेर गृहकार्यका रूपमा दिनुमै आफ्नो पेसागत कर्तव्य पूरा भएको ठान्ने शिक्षकको संख्या निकै बढी देखिन्छ ।
शिक्षक तालिम तथा शिक्षक केन्द्रित बिएड, एमएड कार्यक्रमबाट उत्पादित जनशक्ति यस क्षेत्रमा संलग्न भए पनि धेरै शिक्षक पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रमबीचको अन्तर तथा पाठ्यक्रमका उद्देश्य पूरा गर्न साधनका रूपमा पाठ्यपुस्तक प्रयोग भइरहेको भन्ने विषयमा सचेत पाइँदैन । पाठ्यपुस्तक पढाउनु अनि पाठ्यपुस्तकमै रहेका अभ्यासमध्ये केही छानेर गृहकार्यका रूपमा दिनुमै आफ्नो पेसागत कर्तव्य पूरा भएको ठान्ने शिक्षकको संख्या निकै बढी देखिन्छ । पाठ्यपुस्तकमा मात्र केन्द्रित भइदिँदा पाठ्यक्रमको उद्देश्य र कक्षाकोठाका गतिविधि ‘कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ महसुस हुन्छ। शिक्षक नै के, किन सिकाउँदै छु भन्ने विषयमा अस्पष्ट रहेपछि विद्यार्थी, गृहकार्य– शिक्षक र अभिभावकका लागि गरिदिने काम हो भन्नेमा ढुक्क हुने नै भए । कागको कुहिरो बनेका विद्यार्थी सिर्जनात्मक गृहकार्य गर्नुको साटो मात्र परीक्षामुखी भई तत्कालीन गर्जो टार्न वा शिक्षक र अभिभावकका आँखा छल्न सारेर गृहकार्य बुझाउने गरेको देखिन्छ । कक्षाकोठामा औपचारिक रूपमा गरिने पठनपाठन मात्र सिकाइ हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त नभएसम्म वा नपारेसम्म विद्यार्थी गृहकार्यप्रति सकारात्मक हुन सक्दैनन् । यसैले सर्वप्रथम गृहकार्य थोपर्नुभन्दा बालबालिकाको मनोविज्ञान तथा सामाजिक विकास र पाठ्यक्रमको उद्देश्यप्रति शिक्षक स्पष्ट हुनुपर्छ। अनि यो कुरा विद्यार्थीलाई बुझाएर मात्र सिर्जनात्मक गृहकार्य दिँदा प्रभावकारी हुने कुरा अध्ययनहरूबाट स्पष्ट भइसकेको छ। हाम्रो सन्दर्भमा भने निम्न प्रकृतिको गृहकार्य दिने गरेको देखिन्छः
१. कक्षामा पढाइएका पाठसँग सम्बन्धित अभ्यास
२. कक्षामा पढाउन नभ्याएका कुरा
३. कक्षामा पढाएका कुराको पुनरावृत्ति हुने अभ्यास
४. कक्षामा पढाएको भन्दा सजिलो अभ्यास जो उनीहरू स्वयं गर्न सकुन्
५. कक्षामा पढाएको भन्दा अप्ठ्यारो अभ्यास जसका बारेमा उनीहरू घोत्लिन सकुन्
६. विद्यार्थीलाई व्यस्त राख्न विषयवस्तु सम्बद्ध कुनै पनि काम
यीमध्ये सुरुका ४ किसिमका गृहकार्य दिने शिक्षक– शिक्षाको तहगत तथा पाठ्यक्रमको मर्मसँग अनभिज्ञ तथा पाठ्यपुस्तकलाई नै सबै थोक ठान्ने प्रवृत्तिका ठहर्छन् । जसरी हुन्छ पाठ्यपुस्तक पढाएर कोर्स पूरा गर्ने र पढाएका पाठका अभ्यासबाट प्रश्न सोधी तह पार गराउने मात्र उद्देश्य रहेकाले यस्ता शिक्षकबाट शिक्षित विद्यार्थीले अघिल्लो वर्ष पढेका कुरासँग सम्बद्ध प्रश्नमा ‘यो त पोहोर साल पढेको हो, बिर्सिएँ, अहिलेको अभ्यास सोध्नुहोस् न’ भन्ने जवाफ दिन्छन् । अर्को शब्दमा– वर्षदिनका उसका शैक्षिक गतिविधि मात्र विद्यार्थीलाई व्यस्त राख्न तथा परीक्षा पास गर्न गरिएका थिए, जुन अर्को कक्षामा पुग्नासाथ अर्थहीन ठहरिन्छन् । यस्तो मानसिकता हामीले निर्माण गरिदिने हो भने विद्यार्थीको पठन संस्कृति र अध्ययनप्रति रुचि कसरी जाग्न सक्ला ? सोचनीय विषय हो ।
५ र ६ नम्बरमा उल्लेख गरिएका गृहकार्यको प्रकृति केही सिर्जनात्मक भए पनि पहिलो अभिभावकलाई ट्युसन टिचरको आवश्यकता महसुस गराउने किसिमको देखिन्छ भने दोस्रो अभिभावकको प्रभावले प्रेरित प्रकृतिको छ । विद्यार्थीको मनोविज्ञानलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको यस प्रकारका गृहकार्यले विद्यार्थीलाई सहयोग गर्नेभन्दा उसको मनोबल कमजोर पारी ‘म पढ्न÷लेख्न सक्दिनँ’ भन्ने इन्फेरियर कम्प्लेक्सको सिर्जना गराई पढाइबाट हतोत्साहित गर्ने सम्भावन बढी रहन्छ। कक्षाकोठा विद्यार्थीलाई नियन्त्रण गरेर राख्ने ठाउँ होइन, उनीहरूको सिकाइलाई सहजीकरण गर्ने ठाउँ हो। तर यस्ता गृहकार्यले विषयवस्तुप्रति अरुचि मात्र होइन, शिक्षकसँग एक किसिमको अस्वाभाविक दूरी र भय सिर्जना गर्न सक्छन् । जसका कारण अभ्यासमा घोत्लिनुको सट्टा पढाइलेखाइप्रति नै वितृष्णा हुन्छ ।
विद्यालयबाट घरमा आएपछि चकचक मात्र गर्ने, ग्याजेटमा मात्र रमाउने भएकाले एकथरी अभिभावक धेरै किताब र धेरै गृहकार्य नदिने स्कुललाई स्तरहीन स्कुल मान्छन् । यसैले घर आएपछि सरासर गृहकार्य गरोस्, त्यतिन्जेलमा सुत्ने बेला भइहाले टन्टा नै खतम भन्ठान्ने अभिभावक बच्चालाई महँगो स्कुल पठाउन पाएकामा दंग छन् । तर उसको स्तरअनुकूलको सिकाइ तथा संवेगात्मक विकासमा बेखबर नै रहन्छन् । भुल्ने र भुलाउने कामका रूपमा गृहकार्य दिने भएपछि विद्यार्थीको सिकाइस्तरमा सकारात्मक प्रभाव नपर्नु स्वाभाविकै हो । सामान्यतया प्राइमरी तहका विद्यार्थीलाई संरचनात्मक गृहकार्य दिनु उपयुक्त हुँदैन । आफ्ना परिवार, समाज, व्यक्ति र कामबारे वर्णन गर्न भने लगाउन सकिन्छ । ५ कक्षाभन्दा माथि मात्र तहअनुरूपका गृहकार्य दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
वास्तवमा गृहकार्य सैद्धान्तिक कुराको प्रयोगात्मक वा व्यावहारिक पाटोसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ । बन्द प्रयोगशालामा गरेको परीक्षण दैनन्दिनी व्यवहार र प्राकृतिक क्रियामा कहाँ प्रयोग भएको छ, हेर्ने र अनुभव गर्ने तथा त्यस परीक्षणको नतिजा दैनिक सामाजिक कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिएला भन्ने जिज्ञासा राख्न सक्ने र समाधानका लागि क्रियाशील हुन प्रेरित गर्ने गृहकार्य आजको माग हो । आफूले सिकेका कुरासँग सम्बन्धित सीप कहाँ प्रयोग भएको छ ? त्यसको प्रयोग कसरी र किन भइरहेको छ ? यसले समाज तथा समुदायलाई के सहयोग पुर्‍याएको छ ? कहिलेदेखि समाजले उक्त प्रविधिलाई आत्मसात् गर्‍यो र यसलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिएला भन्ने जिज्ञासा राख्न सक्ने बनाउने गृहकार्यले विद्यार्थीलाई खोजमुखी तथा सिर्जनशील बनाउँछ ।
कक्षाकोठाबाट बाहिर आउँदा विद्यार्थी अघाएको होइन, खुलदुलीले भरिएको हुनुपर्छ । परम्परागत पढाइलेखाइमा जस्तो गुरुले समस्या समाधान गरिदिने होइन, समाधानका लागि बाटो देखाइदिने र सिकाइप्रति भोक जगाइदिने हो । सामाजिक शिक्षा पढेपछि विद्यार्थी तथ्यांक कण्ठ गर्ने होइन, आफ्नो समाजका सदस्यका पेसा, आर्थिक स्थिति, शिक्षा र स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने र विश्लेषण गर्न सक्ने हुनुपर्छ । फोहोर व्यवस्थापन, वर्गीकरण र पुनः प्रयोग उसले किताबका चित्रबाट बुझ्ने होइन, व्यावहारिक रूपमा बुझ्नुपर्छ । सामान्य मेसिन पढेपछि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो क्लास लिभर दैनिक जीवनमा कसरी सहयोगी बनेका छन् र व्यवहारका कठिनाइमध्ये कुन–कुन क्षेत्रमा लिभरको प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
गृहकार्य यस्ता विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । पानीको शुद्धीकरण पढेपछि घरमा त्यसको प्रयोग गर्न सक्ने, भाषिक सीप सिकेपछि त्यसको वास्तविक प्रयोग गर्न सक्ने र परम्परागत ज्ञान एवं प्रविधिका राम्रा पक्षलाई आत्मसात् गर्ने र अन्य पक्षमा सुधार ल्याउन सक्ने दृष्टिकोण विकास गर्ने प्रकृतिका गृहकार्य दिने हो भने न यो विद्यार्थीको भार बन्छ न त टाइमपास गर्ने साधन मात्र । यसैले सिकाइसम्बन्धी धारणामा परिवर्तनका लागि ढिलो नगरी सम्बन्धित क्षेत्रमा क्रियाशील सबै तयार हुनैपर्ने बेला भएको छ ।
विचार हराएको कांग्रेस
-डा. घनश्याम भट्ट
मानवअधिकारको सम्मान, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायालयप्रति आस्थावानले कांग्रेस त्याग्ने वातावरणको निर्माण कांग्रेस स्वयंले गर्दैछ, यो आत्मदाह नभएर के हो त ?
आफ्नो झण्डामा भएका चार तारालाई कांग्रेसले चार आधारभूत स्वतन्त्रतासँग जोडेको छरथियो । ती आधारभूत स्वतन्त्रताले मानव अधिकारलाई सर्वोच्च स्थानमा राख्छन् । यिनै मान्यताका कारण भ्रष्टाचार र कुशासनका अनेक मुद्दामा आरोपित हुँदा पनि पटक पटक जनताले कांग्रेसलाई सम्मानित स्थान दिएका छन् । वर्तमान परिस्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षमा कांग्रेसले प्राप्त गरेको स्थान पनि सम्मानजनक छ । नत्र भारतमै हेरौं न, जनताले प्रतिपक्षलाई कुन धरातलमा होच्याएका छन् । ती आधारभूत स्वतन्त्रतासँगको सम्झौता कांग्रेसको नीतिविपरीत हुन्छ । लोकतन्त्रको सर्वोच्च मन्दिर संसद्को सभामुखमा मानवहत्या जस्तो जघन्य अपराधमा आरोपित व्यक्तिलाई प्रस्ताव गरिँदा कांग्रेसले आफ्नो फरक मत वा विमतिसम्म राख्न उचित ठानेन । लोकतन्त्रमा फरक मत एक शक्तिशाली शस्त्र हो । कांग्रेसले आफ्नो सैद्धान्तिक विमति प्रदर्शन गर्न सक्थ्यो । मानव अधिकारको पक्षमा आफ्नो मत इतिहासमा अंकित गर्ने अवसर गुमेको कांग्रेसका मस्तराम नेताहरूले चालै पाएनन् । भ्रष्टाचार काण्डमा आफ्ना नेताको बचाउ गरेर कांग्रेसले अर्को अवसर गुमाएको छ ।
एउटा दन्त्य कथा छ—एउटा जंगलमा ठूलो आगलागी भएछ । सबै जनावरहरू भागाभाग भएछन्। दुईवटा चराहरू भने एउटा नजिकैको पोखरीबाट आफ्नो चुच्चोमा पानी ल्याउँदै आगोमा हाल्दै गरिरहेका रहेछन् । एउटा हात्तीले ती चरालाई देखेछ र सोधेछ, ‘ए मूर्ख चराहरू हो, तिमीहरूले यो के नाटक गरेको ? तिमीले बोकेको पानीले यो आगो निभ्दैन, आफ्नो समय नष्ट नगर। बरु भागेर सुरक्षित स्थानमा गएर बस।’ चराहरूले भनेछन्, ‘हामी चुच्चोमा बोकेको पानीले जंगलको आगो निभाउन सक्दैनौं तर यो आगो निभाउने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो । वर्षौंपछि यो आगो निभाउन खोज्ने र निभाउन नखोज्ने व्यक्तिको इतिहासले खोजी गर्नेछ । हामी चाहन्छौं, त्यसबेला इतिहासले हामीलाई यो आगो निभाउन प्रयत्न गर्ने प्राणीको रूपमा लिपिबद्ध गरोस् ।’ ती चराहरूले आफ्नो मत प्रदर्शन गर्ने अवसरको सदुपयोग गरे। एक प्रतिपक्षीका रूपमा प्राप्त भएका संसदीय अवसरहरू कांग्रेसले रणनीतिको अभावले गुमाउँदै गइरहेको छ । यो कांग्रेस नेतृत्वको वैचारिक संकुचनको संकेत हो ।
अमेरिकी संसद्मा हालै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले महाभियोग सामना गरे । अमेरिकी संसद्को तल्लो सदन कांग्रेसमा डेमोक्रेट र माथिल्लो सदन सिनेटमा रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत छ । कांग्रेसमा दलीय आधारमा मत विभाजन भएको स्पष्ट देखिएको थियो । राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्न सिनेटमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ तर डेमोक्रेटसँग त्यहाँ सामान्य बहुमत पनि थिएन । त्यसैले ट्रम्पलाई सिनेटले पदमुक्त गर्ने कुनै सम्भावना थिएन । तर पनि सिनेटले यो महाभियोगमा पन्ध्र दिनसम्म बहस ग¥यो । ट्रम्पले पाएको सफाइ आश्चर्यजनक थिएन । तर सिनेटमा व्यक्त गरिएका धारणा इतिहासले कैद गरेको छ । रिपब्लिकन पार्टीका एकजना सिनेटर मिट राम्नीले ट्रम्पको विरुद्धमा मत हाले । उनको एक मतले महाभियोगको परिणाममा कुनै फरक पर्दैनथ्यो तर उनको त्यो मत भने इतिहासमा अंकित हुनेछ । सिनेटमा प्रस्तुत गरिएका मतले अमेरिकाको आगामी निर्वाचनमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने छन् । यो लामो समयसम्म अमेरिकाको राजनीतिमा देखिनेछ। नेपालको इतिहासले कांग्रेसलाई अग्नि सापकोटाको पक्षमा राख्नेछ । सभामुखमा कांग्रेसको पराजय निश्चित थियो तर लम्पसार हुनुआवश्यक थिएन । कांग्रेसका नेता, नीति र रणनीतिका असफलता यो लम्पसारवादका प्रमुख कारण हुन्, त्यसैले यसको परिणाम कांग्रेसले देख्नेछ, भोग्नेछ ।
गत निर्वाचन नेकपाका नेता केपी ओली र कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको बीचको प्रतिस्पर्धा थियो। तर ओली डँडेलधुरामा देउवासँग वा देउवा ओलीसँग झापामा प्रतिस्पर्धामा थिएनन् । डँडेलधुरामा नेकपा र झापामा कांग्रेसले उम्मेदवारी भने दिएका थिए । पराजय हुने निश्चित भएका स्थानमा पनि तिनले उम्मेदवारी किन दिए ? किनकि त्यसो गर्दा आफ्ना राजनीतिक मुद्दाहरू जीवित रहन्छन् । पराजित भएर पनि आफ्नो सैद्धान्तिक आन्दोलन जीवित रहन्छ। पराजय निश्चित हुने खेलमा पनि नेपालले ओलम्पिक खेलमा खेलाडी पठाउने गर्छ। किन ? खेलाडीको मनोबल उच्च राख्न, खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न । त्यसो नगरे खेलको स्तरमा वृद्धि हुँदैन। पराजय निश्चित भएको राजनीतिमा पनि आफ्ना मुद्दा कायम राख्न र कार्यकर्ताको मनोबल उच्च राख्न नेतृत्वले उच्च प्रयास गरिरहनुपर्छ । आत्मसमर्पण राजनीतिमा आत्मदाह हो ।
एमालेले माओवादीसँग एकता गरेपश्चात युद्धकालका अमानवीय हत्या हिंसाका घटनाका मुद्दा स्वाभाविक रूपले प्रतिपक्षी कांग्रेसको पोल्टामा गए। एमाले र माओवादीको एकीकरणपश्चात् कांग्रेससँग जनताको अपेक्षा बढेको कांग्रेसका नेताका इन्द्रियले चाल पाएनन् । मानवअधिकारको उच्च सम्मानमा विश्वास गर्ने तत्कालीन एमाले नजिकका कतिपय बौद्धिकलाई कांग्रेसले आफूतिर आकर्षित गर्ने र पीडितको पक्षमा बोल्ने त्यो एक अवसर पनि थियो । कांग्रेसलाई त्यसको मतलब भएन । युद्ध क्रममा भएको जनजनको क्षतिको राजनीतिक छिनोफानो होला तर युद्धकालमा आस्थाका आधारमा वा आर्थिक लेनदेनका लागि माओवादी युद्धमा कांग्रेस, एमालेलगायत अन्यको ठूलो मानवीय क्षति भएको छ । तिनको विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षमा एकमत भएपछि अब जनताले कांग्रेसलाई केको आधारमा चिन्ने ? लोकतन्त्रको भद्दा मजाक उडाएर रेणुदाहाललाई मेयर बनाउन कांग्रेसको सहयोग थियो। वाइडबडी र एनसेल कर छली जस्ता भ्रष्टाचारका बृहद मुद्दामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिएका छन् ।
कांग्रेसको सैद्धान्तिक विचलन, व्यक्तिगत स्वार्थ र दिशाहीनताले गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टी त्याग गरेका थिए। तैपनि नेता, नीति र रणनीतिको अभावमा संकुचित भएको कांग्रेसको संकुचन यात्रा जारी छ ।
खुल्ला मञ्चमा सत्तारूढ दलका अध्यक्षले पाँच हजारको हत्याको जिम्मा आफ्नो भनेर हुंकार गरेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल शीत निन्द्रामा मस्त छ । ललिता निवास काण्डमा विजय गच्छदार र रौतहटको एक हत्याकाण्डमा अफताब आलमको नाम मुछिनुमा भने कांग्रेसको सत्तापक्षसँग विमति छ । गच्छदारको छिनोफानो अदालत बाहिर खोज्नुस्वतन्त्र न्यायालयप्रतिको अनास्था हो। अदालतमा सत्य तथ्यको भन्डाफोर गरेर सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने अवसर कांग्रेससँग अझै सुरक्षित छ । संकुचित कांग्रेसलाई फराकिलो बनाउने यो एक अवसर पनि हो तर कांग्रेस केवल गच्छदारको मुक्ति चाहन्छ ।
कांग्रेसले आफ्नो विद्यार्थी संगठनको मनोबल घटाउन पनि अनेक प्रयत्न गरेको छ । पदको मिलोमतो गरेर अस्थायी रूपमा विवाद थामथुम पार्नमै कांग्रेसले समय बर्बाद गरिरहेको छ। एकथरि देउवालाई जसरी पनि जोगाउनैपर्ने र त्यसबाटै आफ्नो भलाई हुनेमा निश्चिन्त छन् भने अर्काथरी देउवालाई हटाएर पार्टीमा हालीमुहाली गर्ने अवसरको खोजीमा छन् । कार्यकर्ताले गच्छदारलाई बोक्नमा पनि दलीय स्वार्थ छैन, निजी स्वार्थ छ । कम्युनिस्टको सरकारमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण फस्टाएको छ । कम्युनिस्ट नेताले उपयोग गरिरहेका अनेक सुविधाले समतामूलक समाज निर्माणको उपहास गरेको छ । असमानता बढ्दो छ । कांग्रेसले सामाजिक रूपान्तरणका लागि चाहिने नवीनतम विचार र बृहद राष्ट्रनिर्माणका लागि चाहिने भावी दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । बृहद राजनीतिक मुद्दामा कांग्रेस मौन छ, समसामयिक मुद्दामा विचारविहीन छ र कुशासनमा सरकारको सहयोगी बनेको छ । त्यसैको परिणाम कांग्रेसले मिडियामा कम स्थान पाएको छ । कम्युनिस्ट नेताहरूले सर्वहारा मुक्तिका विश्वव्यापी नाराहरू घोकेका छन् । तिनले साम्यवादको एकतर्फी अल्प ज्ञानार्जन गरेका छन्, त्यसैले तिनले वास्तविकतामा समानता ल्याउन सकेनन् । विरोध र प्रतिक्रियावादले विद्रोह हुन्छ, समृद्धि हुँदैन । त्यो अल्पज्ञान अहिलेको समृद्धिको बाधक हो। दुर्भाग्य के हो भने कांग्रेसमा कम्युनिस्ट जति अध्ययनशील नेता पनि छैनन् । तिनलाई कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल भएको र कम्युनिस्टमा रुन पनि नपाइने भन्ने मात्र थाहा छ, बस । कुशासनका विरुद्ध शब्द र वाक्यको चयन मात्रै उपयुक्त गर्न सके लोकतन्त्रमा मिडिया प्रतिपक्षको हुन्छ । विचारशून्यताले गर्दा कांग्रेसले मिडियालाई आफूतिर आकर्षित गर्न सकेको छैन ।
अहिले नेपालको सरकारले एक अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न खोजेको छ । एमसीसी सहयोग संसारका सबै देशले प्राप्त गर्दैनन् । मानवअधिकारको उच्च सम्मान र भ्रष्टाचार नियन्त्रण यसका निश्चित मापदण्डमध्येका हुन्। एमालेले माओवादीसँग एकता गरेपश्चात नेकपाको भविष्यको बाटो तय भएको छैन। नेपालमा जघन्य अपराधमा मुछिएकालाई कुनै कारबाही नगरिएकाले पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई विदेश भ्रमणका क्रममा अपमानजनक व्यवहार गरिएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विदेश यात्रामा पनि अनेक प्रश्न उठेका थिए । ती शोभनीय होइनन्। त्यसैले मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमा कांग्रेसले पनि मौन ग्रहण गर्नुदेशकै लागि दुर्भाग्य हुन्छ । मानवअधिकार उल्लंघन हुने कुनै पनि कार्यको अनुपालनले कांग्रेसको राष्ट्रिय र अन्तर्रा्ष्ट्रिय छविसमेत बिग्रनेछ । एमसीसी सहयोग नेपालमा आइहाले पनि मानवअधिकारको उल्लंघन वा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिएन भने यो सहयोग जुनसुकै बेला स्थगित हुनसक्छ ।
राणाशासनविरुद्ध बोल्नु मात्रै पनि एक ठूलो मुद्दा थियो । त्यसैको परिणाम २०१५ सालमा कांग्रेसले सम्मानजनक जनमत प्राप्त गर्‍यो । निर्दलीय व्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष गरेर बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पुरस्कार पनि कांग्रेसले पाइसकेको छ । नेपालमा कम्युनिस्ट दलहरूको व्यापक उपस्थिति हुनुले पनि लोकतान्त्रिक दल कांग्रेसलाई थोरबहुत लाभ मिलेको छ । ‘बाहुनले पनि जनै देखाउनुपर्छ र ?’ भन्ने उखान झैं कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विषयमा सधैं शंकाको लाभ प्राप्त गरेको छ । तर नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडिएका जो कोहीका लागि कांग्रेसको अहिलेको भूमिका सन्तोषजनक छैन, त्यो चिन्ताजनक छ । कांग्रेसले आज खेलेको भूमिकाको आधारमा भोलिको पुस्ताले कांग्रेसलाई चिन्नेछ । कांग्रेसले सभामुखमा व्यक्ति हत्या जस्तो जघन्य आरोप लागेको व्यक्तिलाई सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गरेर सैद्धान्तिक गल्ती गरेको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेल्ने कांग्रेसले क्षणिक स्वार्थ वा सानो प्रलोभनका लागि मानवअधिकार जस्तो आफ्नो सैद्धान्तिक विषयमा सम्झौता गर्नुकांग्रेसका तमाम लोकतान्त्रिक योद्धाप्रतिको धोखा हो । सापकोटा र गच्छदारको बचाउ गर्नुकांग्रेसका लागि आत्मदाहसरह हो । भविष्यमा कांग्रेसको राजनीति गर्ने अहिलेको नयाँ पुस्ताले यसको मूल्य तिर्नुपर्नेछ । अब कांग्रेसले जनै देखाउनु पर्नेछ । हिङको टालोमा हिङ भर्नुपर्नेछ ।
गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईसम्मको कांग्रेस लोकतन्त्रका लागि संघर्षरत थियो । त्यसबेला लोकतन्त्र स्वयंमा एउटा ठूलो जोखिमपूर्ण मुद्दा थियो । चार आधारभूत स्वतन्त्रता कांग्रेसका आदर्श भएकाले कांग्रेस बहुदलपश्चात आजसम्म जीवित छ । कांग्रेसको सैद्धान्तिक विचलन, व्यक्तिगत स्वार्थ र दिशाहीनताले गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले कांग्रेस त्याग गरेका थिए । नेता, नीति र रणनीतिको अभावमा संकुचित भएको कांग्रेसको संकुचन यात्रा जारी छ । मानवअधिकारको सम्मान, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायालयप्रति आस्थावान् जनताले कांग्रेस त्याग्ने वातावरणको निर्माण कांग्रेस स्वयंले गर्दैछ । यो आत्मदाह नभएर के हो त ?
हामीबीच एकता रह्यो भने थुप्रै अवसर सिर्जना हुनेछन् : अध्यक्ष ढकाल (अन्तर्वार्ता)
करिब २० वर्षअघि उच्चशिक्षा आर्जनका लागि राजधानी छिरेका पाँचथर नागीका नरेन्द्रप्रसाद ढकालको सुरुआती रुचि भूगोलमा थियो । भूगोल विषयमा उच्चशिक्षा हासिल गरेका ढकाल कालान्तरमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बन्न पुगे । भनिन्छ, बगिरहेको खोलाले ठुल्ठूला ढुंगा काट्छ । त्यो उसको शक्तिले होइन, निरन्तरताले हो । यो आहान व्यवसायी ढकालको जीवनमा पनि लागू हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनको अध्यक्षमा आफ्ना अन्य ४ प्रतिष्पर्धीलाई उछिन्दै निर्वाचित भएर व्यवसायी ढकालले त्यही निरन्तर बगी रहने खोलाको क्षमता आफूमा देखाएका छन् । इमास्को नेपालबाट संस्थागत वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमा प्रवेश गरेका ढकाल सुनौलो नेपाल हुँदै हाल नौकरी नेपालका सञ्चालक बनेका छन् ।
एसोसिएसनको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि सबै क्षेत्रका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई एउटै मञ्चमा उभ्याएर यस क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई सहयोग गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ । ढकाल एसोशिएसनको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको दुई गुज्रिसकेको छ । प्रस्तुत छ, एसोएिनका अध्यक्ष ढकालसँग मध्यान्ह प्रतिनिधि रेशमराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई एउटै मञ्चमा उभ्याएर वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई सहयोग गर्ने तपाईंको प्रतिबद्धता थियो । दुई हप्ताको अवधिमा के–के काम भए ?
म नेपाली काँग्रेसको शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा रहेको यस नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको दुई हप्ता भयो । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्याहरूको समाधानको पहल गर्ने त व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नै हो ।
यो दुई हप्ताको अवधिमा एशोसिएसनले नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव, नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, नेपाली काँग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला केन्द्रीय सदस्य पूर्वमन्त्री गगन थापा, छाया सरकारकी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डा. डिला संग्रौला, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाललगायत वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा चासो राख्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई भेट्यो । भेटमा हामीले शुभकाामना मात्र लिएका छैनौं ।
वैदेशिक रोजगारक्षेत्रको मुलुकको अर्थतन्त्रमा रहेको योगदान र यस क्षेत्रमा समाधान हुन नसकिरहेका समस्याहरूको बारेमा उहाँहरूको गम्भीर रूपमा ध्यानकर्षण गराएका छन् । समस्याबारे देशका नेताहरूलाई जानकारी गराउने विषयमा विगत दुई हप्ता महत्वपूर्ण रह्यो ।
के–के समस्या राख्नु भयो ? तपाईंहरूको भेटघाटले वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकिरहेका समस्याले समाधान पाउलान् त ?
वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा समस्या रहेका छन् भनेर सबैले स्वीकारेको विषय हो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सुधारका लागि विभिन्न पहल गरेको बताएको छ । ऐन कानून संशोधनका क्रममा रहेको बताइएको छ । तर सरकारले ती विषयमा हामी व्यवसायी र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघजस्ता सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रर्याप्त छलफल गर्न चाहिरहेको छैन । सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर काम नगरेसम्म समस्या समाधान हुँदैनन् ।
करोडौं लगानी गरेका हामी व्यवसायी सुधारका हिमायती नै हौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नक्कली मागपत्रका कारण हुने ठगी न्यून गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई पारदर्शी बनाउने भन्दै वैदेशिक रोजगार मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेको हो । तर हाल परिणाम के भइरहेको छ ? सोही निर्देशिका कारण नेपाली कूटनीतिक नियोगमा अनुचित चलखेल देखिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । सरकारले उक्त निर्देशिका जारी गर्दा कूटनीतिक नियोग र विदेशस्थित रोजगारदाताबीच सम्पर्क सुदृढ हुने बताएको थियो । तर कर्मचारीले थपेका अनावश्यक झन्झटले रोजगारदाता आजित भएका छन् । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र नेपाल आउने रेमिट्यान्सलाई नै असर गरिरहेको छ ।
यस्ता विषयमा मन्त्रालय र राजनीतिक दलहरू पनि गम्भीर हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । सरोकारवालाहरूलाई पन्छाएर कुनै पनि नयाँ कदम अगाडि बिढाइनु हुँदैन । खाडीका केही कूटनीतिक नियोगहरूले आफूखुसी तलब तोकेका कारण त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या छ । तर दोष व्यवसायीहरूलाई मात्र लगाउने गरिएको छ । सरकार र केही गैर सरकारी संस्थाले वैदेशिक रोजगारका विषयमा हामी निजी क्षेत्रका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई मात्र दोष देखाउने काम भएको छ । यसलाई परिवर्तन गरी देशमा रोजगारीको अवसर नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गरिएमा समस्याको समाधान सहज हुनेछ ।
तपाईंले त वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा रहेका राजनीतिकदेखि जातीय, भेगीय सबै संघ–सस्थासँग वार्ता गरेर सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउँछु भन्नु भएको थियो । के पहल भयो ?
एसोसिएसनको निर्वाचनपछिका दुई हप्तामा भएका कामबारे मैले बताइसकेँ । मुलुकको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका समस्याले समाधान नपाउनुमा यहाँभित्र रहेको राजनीतिको पनि भूमिका छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । गत हप्ता वैदेशिक रोजगार सामाखुशी एकता समितिका साथीहरूसँग सहकार्यका विषयमा छलफल गरेँ ।
आगामी हप्तादेखि सत्तारूढ दलनिकटका व्यवसायी तथा अन्य जातीय तथा भेगीय संघ–संगठनका साथीहरूसँग पनि छलफल गर्छु । सत्तारूढ दलनिकट व्यवसायीहरू र प्रतिपक्षी दलनिकटका व्यवसायीहरू समस्या समाधानका लागि एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ ।
वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा तत्कालका समस्या के–के देख्नु भएको छ ?
वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरणका लागि राखिएको वार्षिक एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले सिर्जना गरेको अन्योल हट्नु पर्छ भनेर हामीले गत दुई हप्ता भेटघाट गरेका राजनीतिक दलका नेतादेखि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकज्यूलाई भनेका छौं ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीलाई भेटेर ऐन र नियमावलीको अन्योलता हटाउनुपर्ने माग राखेको छ । कसैलाई पनि अनुचित बन्देज लगाएर पेसा–व्यवसाय गर्ने अधिकारबाट बेदख्खल गर्नु हुँदैन भन्नेमा एसोसिएशन रहेको छ । यो समस्याले तत्काल समाधान पाउनुपर्छ भन्ने अधिकांश व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
अनि दीर्घकालीन समस्या ?
सेवा शुल्कको विषय वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या रूपमा रहेको छ । यो विषय विगत केही वर्षदेखि कायम छ । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने दक्षिण एसियाको नेपालमात्र होइन, छिमेकी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकादेखि फिलिपिन्स र भियतनामबाट एकै ठाउँमा कामदार गएका छन् ।
हामी नेपालमा पनि वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने व्यवस्था र व्यवसायीहरूले पाउने सेवा शुल्क ती देशसरह हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । संघको वर्तमान नेतृत्वले यो विषय जोडदार रूपमा उठाएको छ । त्यसअघिको संघको नेतृत्वले पनि यो विषय उठाएको थियो । त्यसमा सरकारले ध्यान दिनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । हामी व्यवसायी राज्यलाई कर तिर्न आतुर रहेका छौं । उचित सेवा शुल्क तोक्ने र व्यवसायीहरूलाई कारोबार सञ्चालनमा भएको नाफा अनुसार राज्यलाई कर तिर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।
तपाईंहरू कामदारका समस्याप्रति ध्यान नै दिनुहुन्न भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । के भन्नुहुन्छ ?
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये न्यून कामदारमात्र दक्ष छन् । अरू सबै थ्रीडी भनिने डर्टी, डेन्जरस र डिफिकल्ट काममा जानुपर्ने बाध्यता छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूलाई दक्ष बनाउन सरकारले सीप सिकाउन जरूरी छ । विदेशमा मान्छेका काम यन्त्रले गर्न थालेका छन् ।
सरकारले ठूला–ठूला तालिमकेन्द्र नखोलेसम्म हामी निजी क्षेत्रले दिने सानो अवधिको अभिमुखीकरणले वैदेशिक रोजगारका क्रममा कामदारले झेल्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न सक्दैन । कूटनीतिक नियोगहरूलाई कामदारमैत्री बनाउनु प¥यो । देखिएका समस्या समाधान गर्दै आगामी दिनमा कन्स्ट्रक्सन (निर्माण) भन्दा सेवा क्षेत्रमा कामदार पठाउन पहल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।
एसोसिएसनको गत निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गरेका तर पराजित भएका साथीहरूलाई फोरममा जिम्मेवारी दिएर अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
एसोसिएसनको गत निर्वाचनलाई लोकतन्त्रप्रति आस्थावान साथीहरूले प्रतिष्पर्धा भनेर बुझ्नु हुँदैन । हामी सबैले एसोसिएसनलाई प्रभावकारी नेतृत्व दिनसक्छौं भनेर उम्मेदवार भएको हो । फोरममा जित्ने वा हार्ने कोही भन्दा कसैको योगदान कम छैन ।
यो सामान्य प्रतिष्पर्धा हो । पद एउटै मात्र थियो निर्वाचन भएपछि एउटाले मात्रै जित्ने थियो । अब हामी नेपाली काँग्रेसमा आस्था राख्ने साथीहरू मात्र होइन विगतमा विभिन्न टाउँमा रहेका तर अल्मलिएका व्यवसायीहरूलाई पनि एसोसिएसनको व्यानरभित्र ल्याउन क्रियाशील हुनुपर्छ ।
एसोसिएसन वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा धेरै सदस्य रहेको ठूलो संस्था हो । हामीबीच एकता भयो भने क्रियाशील साथीहरूलाई थुप्रै अवसर आउने छन् । अबको डेढ वर्षपछि फेरि संघको निर्वाचन हुन्छ । पार्टीले पनि समन्वय समिति गठन कार्यअघि बढाइरहेको छ । योग्यता भएका र क्रियाशील साथीहरूले ती स्थानमा पनि भूमिका पाउनुहुने छ । त्यसैले एउटा निर्वाचनको परिणामलाई लिएर कसैले पनि मन खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था छैन ।
जनसंख्याको आधारमा अल्पसंख्यक ?
नेपालमा पछिल्लो समयमा ‘अल्पसंख्यक’ भन्ने शब्दवाली माथि गम्भिर बहस सुरुभएको छ । नेपालको संविधानमा ‘अल्पसंख्यक’ समुदायको लागि स्थानिय तह, प्रदेश र राष्ट्रिय सभामा आरक्षित सिट सुरक्षित गरिएपछि ‘अल्पसंख्यक’ माथि बहस सुरुभएको हो ।
समाजशास्त्री डा. कृष्णबहादुर भट्टचनका अनुसार ‘अल्पसंख्यक’को परिभाषा संख्याको आधारमा भन्दा बहिस्करण र बँचितिकरणको आधारमा मात्र गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि भन्दै २०७४ साल बैशाख ११ गते नेपालको जनसंख्याको ०.५ प्रतिशत हुने जातजातिलाई ‘अल्पसंख्यक’ भनेर परिभाषित गरेको छ ।
नेपाल सरकारले ९८ जतजातिलाई ‘अल्पसंख्यक’ भनेको छ । यस सूचिअनुसार दलित, मुसलमान, मधेशी र आदिवासी जनजातिका ५६ समुदायलाई ‘अल्पसंख्यकमा’ पर्दछ । यस अनुसार सबैभन्दा ठुलो समुदाय शेर्पा देखि सबैभन्दा सानो कुसुन्डा, राउटे समेतलाई ‘अल्पसंख्यक’ मानेको छ । अल्पसंख्यकमा पर्नेहरुमा आदिवासी जनजातिको राईमा सूचिकृत कुलुङ, नाछिरिङ, याम्फु, चाम्लिङ, आठपहरिया, साङपाङ, बान्तवा, मेवाहाङ, बाहिङ, थुलुङ, खालिङ, लोहोरुङ लगायत छन् ।
तराईमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति राजबंशी, सतार÷सन्थाल, झाँगड, गनगाई, धिमाल, मेचे, पथ्थरकट्टा÷कुशबाडिया, बिन, ताजपुरिया, किसान, मुण्डा, कोचे, छन् । यसरीनै हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने शेर्पा, भोटे, थकाली, ह्याल्मो, डोल्पो, व्यासी सौका, ल्होमी, तोप्केगोला, वालुङ, ल्होपा अल्पसंख्यामा परेका छन् । यसरीनै पहाडी भेगमा बसोबास गर्ने कुमाल, घर्ति÷भूजेल, दनुवार, माझी, चेपाङ, सुनुवार, थामी, याक्खा, घले, खवास, दराई, पहरी, छन्तयाल, बोटे, बरामो, जिरेल, दुरा, राजी, लेप्चा, हायू, राउटे, कुसुन्डा लगायत छन् । यसरी सूचिकृत समूदायको तर्फबाट केहीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएर निर्वाचित पनि भएका छन् भने केहीले भने ‘अल्पसंख्यक’को सूचिकरणलाई अस्वीकार गरेका छन् । केही आदिवासी समुदायले भने स्वीकारेका छैनन् ।
‘जनसंख्याको आधारमा मात्र ‘अल्पसंख्यक’ भन्नु सामाजशास्त्रको दृष्टिकोणले आफैमा बहसको बिषय भए पनि नेपालको परिपेक्षमा आदिवासी लाई ‘अल्पसंख्यक’ भन्नु ठिक होईन ।’ समाजशास्त्री डा. कृष्णबहादुर भट्चनले भन्नु भयो– ‘जनसंख्याका आधारमा ‘अल्पसंख्यक’ भन्ने हो भने नेपालका सबै जातजाति ‘अल्पसंख्यक’ हुन्छन् । खसआर्यको जनसंख्यालाई टुक्राइएर कुमाइ बहुन र पूविर्य बाहुन भन्न थालियो भने उनीहरु झन अल्पसंख्यकमा पर्छन् , यसै पनि नेपालको जनसांख्यिक तथ्यांकमा राजनीति छ ।’
उता आदिवासी अधिकारकर्मी डा. सोम धिमाल पनि आदिवासी लाई ‘अल्पसंख्यक’ भन्न नहुने जिकिर गर्नुहुन्छ । राज्यले कुन हिसाबवाट ‘अल्पसंख्यामा’ राख्यो हामीलाई थाहा छैन । डा. धिमाल थप्नुहुन्छ –‘जल, जमिन, जंगलको अधिकार प्राप्त आदिवासीहरु ‘अल्पसंख्यक’ हुनै सक्दैनन आदिवासीको अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणपत्र र आइएलओ १६९ ले मार्गनिर्देशन गरेको हुन्छ । आदिवासीहरुमा परम्परागत संस्थाहरु कानुनहरु प्रयोग गर्ने अधिकार हुन्छ तर ‘अल्पसंख्यक’हरुले यी अधिकार पाउँदैन्न ।’
आदिवासी अभियान्ताहरु आदिवासीलाई विकास र सहभागिता गराउने हो भने नेपाल सरकारको सूचिकरण र वर्गीकरण अनुसार लोपोन्मुख र सिमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता दिएर योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालका अनुसार ५९ वटा आबिदासी जनजाति समुदायलाई ५ भागमा बर्गिकरण गरिएको छ । त्यस वर्गीकरण अनुसार नेवार र थकाली उन्नत जाति, र अन्य समुदायलाई सिमान्ताकृत, अति सिमान्ताकृत र लोपोन्मुख समुदायमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२मा स्थानीय तहहरुको कार्यपालिका सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र राष्ट्रिय सभामा ‘अल्पसंख्यक’ समुदायका लागि भनी आरक्षित सीट राखिएको छ ।
निको नभएको द्वन्द्वको घाउ
‘जनयुद्ध दिवस’ को सम्झनामा त्याग र बलिदानीका गर्वान्वित वीर रसयुक्त वाणी बोलिनु एक हदमा सार्थक देखिन्छ । युद्ध गर्नु रहर होइन बाध्यता र परिवर्तनको नारा ओकलिन्छ । आपूm सही र हिजोको खराबीको तर्क भिरेर आपूmमैत्री व्याख्या गर्दा मात्र उपलब्धि हो भन्न सकिएला त ! केवल विसङ्गतिको एउटा आभाले पोल्छ जुन केही भएका उपलब्धिलाई छोपिदिने कारक बनेका हुन् । द्वन्द्वको नेतृत्व गर्ने हिजोको टिम नै आज क्रान्ति नै नगरेका व्यक्ति जसरी नै आ–आफ्ना झोली झ्याम्टा बोकेर दगुरेका छन् । सबैलाई नेता नै बन्नु परेको छ । मौरीका राना धेरै हुँदा छुट्टिए जसरी बाँढिँदा हिजोको त्याग बाँढियो, जनताको विश्वास र अभिलासा चुँडियो । जनतामा घात गरियो– अहँ यो कुरा त सर्लक्कै ढाकछोप हुन्छ तब मानवीय संवेदनामा हतौडा प्रहार हुन्छ ।
शान्तिभूमि नेपालमा रगतका खोलाको होली खेलेर सानो सुखी संसारलाई बलात्कार गरेपछि चुपचाप बसेका एक दर्जन बढी सालहरूमा कति आँसु बगेका होलान्, उपलब्धिका पछाडि गुमाएका गुम नामले प्रश्न गरिरहन्छ । आजसम्मका हरेक उपलब्धिलाई युद्धका डोराले बाँधेर राखेको छ । तर, हरेक सफलतालाई एकता र समझदारीले नै निर्णायक भूमिका प्रदान गरेको हुन्छ ।माओवादीले सङ्घर्ष ग¥यो, केही पाएको त छतर धेरै गुमायो । किनकि हिंसात्मक युद्धले ल्याएका खुशी सबैको हीतमा हुँदैनन् । त्यसमा पनि नेपाल त क्रान्तिभूमि स्वाभिमानका लागि हो तर यो त पवित्र शान्तिभूमि पनि त हो ।
बिर्सनुहुन्छ त– हिजो जनताको बिचल्ली भएको थिएन र ? – लुकाएर बिर्सन पनि त मिल्दैन । तत्कालीन माओवादीले आफ्नै कार्यकालमा पनि बेपत्ता पारिएका, अन्यायमा परेका नेपाली जनताको पीडाको सम्बोधन हुने मार्गले चित्तबुझ्दो स्थान ओगटेन । धेरैले विनाकारण पनि जोखिम मोल्न सकेनन् । हो, केही पाउन थुप्रै गुम्यो तर जनताले अझै विगतभन्दा बढी भ्रष्ट्राचारको लप्का व्यहोरिरहनु परेको छ । सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गरेको पाटीभित्रका उच्च ओहोदा ओगटेका व्यक्तित्वले नै सर्वहारा वर्गकै पसिना चुस्न आनाकानी गरेन– इतिहास साक्षी छ । परिवर्तन के हो ? आज पनि जनता ओढारमा बस्छन् । भिरमा खोस्रेर मकै रोप्छन् तर तीन महिना खान पुग्ने अन्न घरमा हुँदैन । सत्य हो– हिमाली क्षेत्रमा जनताको पीडा उस्तै छ नियाल्दा ।
माओवादी जनयुद्धले जनतामा चेतनाको एउटा दियो बालेको कुरा स्वीकार्य छ । सम्मानित छ तर जनताले कत्रो आशा राखेका थिए, आखिर त्यही सङ्घर्ष गरेको भनिएको पाटी नै आज धुजा–धुजा भएर च्यातिन पुग्यो । केवल सम्मान, सम्पत्ति र शक्तिका लागि । अधिकारको बाँडफाँडमा जहानिया शैलीलाई त्याग्ने हिम्मत पनि देखिएन । सत्तालिप्सा र स्वार्थले जनताको बिल्लिबाठ पारेर जुन नेता जङ्गलमा बस्थे, लुक्थे, ज्यान जोगाउँथे आज तिनै वरिपरि सुरक्षागार्ड राखेर गाडीमा हिँड्छन् । तब त जनताले चाहेको आशामा निराशा थपिँदै गयो । त्यसमध्येकै निराशा रहेछ– द्वन्द्व पीडितका आँसुको भेल । हुन त यो विगतमा गर्व गर्न चाहँदा गर्व होला नै तर नेपालले आशा गरेको परिवर्तन नपाउँदा उस्तो नाक फुलाउनुको सार्थकता दोषरहित छैन ।
छोराको हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्ने माग राखेर वीर अस्पतालको शøयामा अनसन बसेका गंगामाया र नन्दलाल दम्पत्तिको पीडा,द्वन्द्व कालमा पारिवारिक बिचल्ली भएका जनताको आँशु कति हृदयविदारक छ । हिजोको सङ्क्रणकालीन घाउ र संविधानको निर्माणसम्मपीडितमा आशा थियो । चुनावका बेला कर्मकाण्डे घोषणापत्रले बोलेको आवाज थोत्रियो आज । पर्दामा नसमेटिएका द्वन्द्वपीडितका आँसुको सम्बोधन कसरी भयो?छोराछोरी द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका बृद्ध बाआमालाई पानी तताएर दिने कोही छैन अनि आज उपलब्धिका चुरीफुरीमा घरदैलो हेर्ने बुद्धि कहाँ कसलाई आयो ?
नेता त जतातिर बटारिए पनि नेता नै छन् तर ती हिजो समर्पित जनताको अवस्था के छ ? सरकारले माओवादीबाट मारिएका १ हजार ३४ सेना, १ हजार ४ सय ९४ प्रहरी तथा ३ सय ७ सशस्त्र प्रहरीका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ राहत दिने घोषणा पनि गर्‍यो । माओवादी पक्षका सहिद परिवारलाई १० लाख दिइयो पनि । यही द्वन्द्वकालीन दश वर्षमा शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षाकर्मी, लडाकु र सर्वसाधारण समेत १७ हजार ८ सय ८६ जना मारिए, १ हजार ७ सय ३० नेपालीले वेपत्ता हुनुपर्‍यो अर्थात् १९ हजार ६ सय १६ जनाको मानवीय क्षति गराइयो । आखिर नेपाली दाजुभाइद्वारा नेपाली मारिए, नेपालीलाई बेपत्ता पारिए । तत्कालीन सङ्घर्षरत माओवादीले दिएको त्रासका कारण करिब डेढ लाख मानिसले विस्थापित बन्नुपर्‍यो ।
वास्तवमा द्वन्द्वकालका कारणले शहरीकरण बढ्यो । धेरै मानिस सुरक्षाका लागि शहरतिर कोचिएर बसे अनि गाउँ फर्केनन् । अर्कोतिर नेपालको ३८ अर्ब, ३३ करोड, १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षतिको तथ्याङ्कभए पनि व्यक्तिगत र सरकारी सम्पत्ति, सवारी साधनको क्षतिको यकिन विवरण छैन । तर, पीडित परिवारको घाउमा मलम गर्न कुनै निकायले दैलोमा जाने आँट र सोच राखेको छ त ?
सोच्नुपर्छ : द्वन्द्वकालमा कैयौँ हत्या भए, अपहरण गरिएका छन्, बलात्कारजस्ता कुत्सित दानवीय व्यवहार भए । शारीरिक, मानसिक, भौतिक सबै खाले प्रहार भए ।अत्याचारको चरम उत्कर्षका कारण निरीह, निर्दोष जनताले पीडाको कहालीलाग्दा वेदनामा मुछिइरहेका तथ्य छन् । दशौँ वर्ष त्रसित देशलेआज पाएको उपलब्धिभित्र के गर्व मात्र गरिरहेको होला?कयौँ नेपालीका सिन्दुर पुछिए, काख रित्तिए दुनियाँले युद्धले ल्याएको प्राप्तिमा गर्व गरिनै रह्यो, अलिकति खुसीमा चरक्क चिरिएको छातिले सरापिरह्यो । आज पनि सराप्दै छ, त्यो व्यक्ति जसले आफ्नो बाबाको तस्विरलाई हेरेर मझेरीमा कुरेको कुरा बल्झाइरहन्छ । आमाको लासमा रगतपच्छे पारेर नारा घन्काएको ध्वनिलाई सम्झिरहन्छ । कैयौँ आमाले सन्तान वियोगको मलीन आवाजको विलौनासँगै प्राण छोडिसकेका होलान् । अनेक विषयमा आशा भिराएर झुलाइएका छन्, विकासको मार्ग गफमा खुलेको छ तर देशले राजनैतिक सोचलाई बदल्न सकेको लाग्दैन । घरको सदस्य बेपत्ता भएको परिवार रोइरह्यो, आशा बोक्यो तर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भइरह्यो । कति पाउनेले राहत पाए, कतिले नपाए पनि हुनेहरू रमाए त धेरै जनता हार खाएर बसिरहेकै छन्, सबैलाई थाहा भएकै विषय हो ।
वर्षेनी घुमेर आउने ती पापी चाडबाडमा चिरिएका छातिलाई कसले न्याय दिन सक्यो । कहाँ दुख्छ घाउ, त्यो अचानाको पिर खुकुरीलाई थाहा हुने अवस्थै छैन । निरीहका छातिमाथि टेकेर सत्तामा बस्दै डुक्रिएका आवाजसँग के शान्तिका बाटिकामा पूmल्न सक्ने सुगन्ध पैmलिएको होला?त्यसका पछाडि भइरहेका रोदन, वेदना र त्यो निरीह चित्कारलाई कसले नियालेको छ र ?कति स्कुले बच्चाले पढ्न पाएनन्, कैयौँको जायजेथोमा अत्याचार गरियो, कैयौँ सुत्केरीले मृत्यु शøयामा प्राण आहुति दिए, कतिले पालैसँग बलात्कार गरे, रगतपछ्छे लासमाथि बलात्कार गर्ने पाशविकतामा कुन हृदय भक्कानिएको होला । तसर्थ युद्धले पीडाकै आगो बाल्छ, शान्तिले शान्तिकै बिउलाई फलाउँछ ।
तीतो सत्य हो–कतिको व्यापार गुम्यो, जायजेथोलाई सर्वनाश गरियो चाहे त्यो राज्य पक्षबाट भयो या त द्वन्द्वकालीन माओवादीबाट भयो तर त्यो भएकै हो । आज जबर्जस्ती बिर्साइए पनि टाउकाको मोल तोकिए तर यस्ता भयानक युद्धसँग मात्रै परिवर्तनको खुबी अड्केको अवश्य होइन रहेछ, समयले सिकाउँदैछ ।
बुद्धजन्य शान्तिको शङ्खघोष गर्न नसक्ने हामी, जनकको राजनीति बुझ्न नचाहने, हिटलरजस्तो प्रवृत्तिको अनुशरण गर्न जान्ने तर रामराज्यको न्याय अनि जनसेवाको आदर्श नीति जान्नै नचाहने, सत्यवादी युधिष्ठिरको रानजीति, विदुरको अर्थनीति, राजनीति र कुटनीति नबुझ्ने हामीलाई पाशविक हिंसात्मकतासँग किन चासो बढिरह्यो पश्चाताप गर्न सक्नुपर्छ । ती पोलेको घाउमा कतिले मलमपट्टि पाए, कतिले पाएनन् भन्ने विषयमा अरुले सोच्न नसके पनि कमसेकम माओवादी नेतृत्वको सरकारले समेत् बुझ्न नसकेको भान हुन्छ । अब पीडा उही जोडिन्छ, ती बेपत्ताका परिवारले, द्वन्द्व पीडितको टुङ्गो नपाएका निरीह परिवारले त्यो आँशु कसका सामु बहाउने, त्यो बिलौनालाई प्रभावकारी सम्बोधन कसरी भयो ?
न्याय व्यवस्थापन गर्न गठित आयोगले त कानुनी मानवीय आधारलाई केलाउला तर संवेदनाभित्र पसेर नियाल्न पीडितको आजको अवस्थालाई हेरिनुपर्छ । किनकि आज त अझ न्यायालयलाई शक्ति र ओहोदाको कालो बादलले ढाकेर न्यायको टोकरीमा स्वार्थ, झुट र निरङ्कुश अमानवीय गुणका विषाक्त फलहरू सजिएका तीता सत्य छन् । समस्यामा मलमपट्टि लगाउनैका लागि बेपत्ता आयोग बने तर ती मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई छानबिन गर्न नसकेका तीता सत्यले पछ्याएकै छन् । संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनलाई कछुवा गतिमा हिँडाएर आँखामा छारो हालिएका वेदनामा उपलब्धिका कुराले नाक फुलाइनुमा कुनै अर्थ रहला र । आजसम्म कतिले शान्ति पाए, गम्भिर विषय छ । न्याय र अन्यायको आगो कसरी बल्दै छ त्यो भोग्नेले बोध गर्छ ।
मानव अधिकार उल्लङ्घनका कैयौँ घटनामा शक्ति र सामथ्र्यको तानाशाही दबाब भएका पीडितका गुनासा खोलाका गीत बनिरहनु लज्जास्पद विषय हुन् । उपलब्धिलाई पोल्टामा राखेर सबैजसो पार्टीले आपूm क्रान्तिकारी, परिवर्तनकारी, जनमुखी भएको घोषणापत्र बोकेर घरदैलोमा भोटको भिख माग्न पुगे तर ती गुनासा कहाँ अड्किए थाहा छैन । पीडकको पहिचान र पीडितलाई न्याय दिने कानुनको दर्बिलो आधारमा देशको उच्च वर्गले कानमा तेल हालेर बस्दा आज भनिएका लोकतन्त्र, गणतन्त्रका उपलब्धिलाई गम्भिर भएर विश्लेषण गर्ने बेला आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सर्वोच्चको आदेशानुसार ऐन संशोधन नभएसम्मका लागि आयोगलाई मान्यता नदिनुका साथै सहयोग नगर्ने विज्ञप्ति दिएको पनि थियो । फेरि एउटा अचम्मको विषय सरकार किन जागरुक बन्न सकेन ?आखिर दोषी कसरी पत्ता लाग्ने हो अनि त्यसका लागि कानुन के बनेको छ, कारबाही कसरी हुन्छ ? के यस विषयमा पनि पार्टीले दोषीलाई काँध हालेर पीडितलाई मुर्गा बनाउने खेल रच्ने त होइन?
द्वन्द्वपीडित परिवार शिक्षा कार्यक्रम, घाइतेहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउने, उच्चस्तरीय सिफारिस समिति गठन गरी शहीदको मापदण्ड निर्धारण, सहीद पहिचान तथा सिफारिस गरी घोषणा गर्नेसम्मका प्रतिबद्धता चार वर्ष अघि नै भएका हुन् ।सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगद्वारा शहीद तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउने नीति पनि त्यति बेलै बनेको हो । यसमा द्वन्द्वका कारणबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका विषय पनि समाहित हुनुपर्ने विषय लुक्दैन ।
तर, कतिपय विस्तृत छानबिन भएका विषयमा समेत् उचित कानुन नहुँदा सोधपुछ गर्ने स्थिति समेत् नरहनु दुःखद् र लज्जास्पद विषय बनेको छ । बेपत्ता बनाइने कार्यको अपराधिकरण बनाइनेसम्मका विषय नहुनु पीडाप्रद पक्ष हो । हिजो जानाजान या अनजानमा भएका कमजोरीलाई अब पनि कुनै सरोकारवालाले ढोकर बस्नु न्यायसङ्गत हुन सक्दैन । पीडितका गुनासासँग हातेमालो गर्ने स्थितिको अभाव हुनुको पछाडि असंवेदनाको पराकाष्ठा भेटिन्छ । आज देखिएका र भन्दै आएका उपलब्धिमा बाठाले नै फाइदा लिए तर कमसेकम मर्ने त मरिगए बाँचेकाहरूको आवाजमा आँसुमा होली खेलिनुहुन्न । ती सबै हाम्रै नेपाली सन्तति हुन् । युद्धले पोलेको घाउमा मलम लगाइनु आवश्यक छ । तिनका आवाज खोलाको गीत नबनून् । यस्तो गम्भिर विषयलाई सम्बोधन गर्नु आजको अवस्थामा सरकार र सरोकारको दायित्व हो । यसो नहुँदायो देशले पाएको सिङ्गो उपलब्धिलाई उपहास गरे सरह हुन्छ भन्दा फरक नपर्ला ।
सामाजिक बहिष्कार र समावेशीकरणको अवधारणा औद्योगिक विश्वको सामाजिक बनावटको द्रुत उथलपुथल, व्यक्तित्ववादको उदय र समानता पछाडि रहेको बजार शक्तिले गर्दा मध्य सन् १९७० मा फ्रान्सबाट नीतिगत रूपमा प्रमुख रूपमा चित्रण हुन गयो । गरिबी हटाउने र मुख्य सामाजिक नीति तय गर्ने सोचेर यो अवधारणा युरोपमा अभ्यासमा आयो । यसभित्र बजारका शक्तिहरूले राजनीतिक–आर्थिक रूपले सामाजिक जीवनका, पारिवारिक सम्बन्ध र संरचनाका प्रत्येक मोडमा रूपान्तरणको अवस्था प्रतिविम्बित गर्छ । यसै सुरुवाती समयमा गरिबीको नयाँ परिभाषा अनि समाजमा रहेको अपाङ्गताको समस्या समेट्ने उद्देश्यमा यो आएको मुख्य रूपले देखिन्छ भने धेरै अभ्यास गर्ने प्रयत्न गरेको बेलायतमा देखिन्छ ।
मानवीय भूगोलमा बहिष्करण र समावेशीकरण ठाउँ, समय र मानवीय व्यावहारिक अनुभव र अभ्यास अनि उत्तर आधुनिकतावादी सांस्कृतिक रूपको उदय साथै सङ्गठनात्मक पुँजीको संस्थागत परिचालनले आयो भन्ने प्रस्ट बुझिन्छ । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय मुख्य गरेर भूमि, परिधि, समय भित्र रहेर निर्णय गरिन्छ ।
विश्व समुदायसँग गोर्खा सेनाबाहेकको हाम्रो अन्य राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक विषयहरूमा आधुनिक र यथार्थपरक दृष्टिकोण जोडिएको सन् १९५० पछि मात्रै हो । यो अगाडी लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यी विषयहरूमा देखिँदैन । समावेशीकरणको अवधारणा विकसित हुन, विश्वमा माक्र्सवादीय सैद्धान्तिक धरातलको आगमनपछि केही युरोपियन मुलुकमा शैक्षिक क्षेत्रहरूमा सजातीय समुदायको अवधारणा सिकाउन सुरु गरियो । पोस्ट मोर्डानिटीको अवधारणाका साथै राजनीतिक–आर्थिक क्षेत्रमा नव उदारवादी अवधारणाले स्वतन्त्रताको, मानवीय मूल्य र मान्यताको, लैङ्गिक अधिकारको, अपाङ्गताको, नीति, योजनामा सहभागिताको साथै बटम अप विकासको बहाव विश्वमै आयो ।
नेपालमा बहिष्करण र समावेशीकरणका कुराहरू ल्याउँदा छूवाछूत प्रथा महत्वपूर्ण भएर सबैभन्दा पहिले उभिन आइपुग्छ ।
जातिका आधारको भेदभाव र छूवाछूत सरदर ३ हजार –३५ सय वर्षदेखिको पुरानो हो, यो भेदभाव नेपालले सन् १९६५ देखि हटाएको छ भनेर लेख्छन्, पुस्तक ः ‘क्राइम रिलेटेड टु अन टच्याबिलिटी इन नेपाल’का लेखक प्राध्यापक लक्ष्मीप्रसाद मैनाली । प्राध्यापक मैनालीले नेपालमा छूवाछूतमा रहेका नौ विभिन्न समूहको पहिचान गरेका छन्, जसमा १. गरगहना बनाउने, भाडाकुँडा बनाउने– श्रम र सीप भएका, २. छालाको पेसा अँगाल्ने, ३. बादी समुदाय, ४. लुगाफाटो धुने– धोबी, ५. नेवार जातभित्रको बिटुला जातहरू (पोखरेल माधव, २०७६), ६. लुगा सिउने र बाजा बजाउनेहरू, ७. गीतांगेहरू– कुसुले आदि, ८. कुमाल समुदाय, ९. तराईमा छूवाछूतमा रहेकाहरू । मैनालीको यस विभाजनमा हिमाली भेगको छूवाछूत छुटाएको देखिन्छ । यहाँ अर्को महत्वपूर्ण पाटो समावेशीकरणमा छूवाछूत हेरेर मात्रै हुँदैन, आर्थिक अवस्था ध्यान दिनुपर्ने हुन जान्छ ।
आरयस चौहान, जैपुर युनिभर्सिटी (१९७१) अनुसार यही समयानुक्रममा सन् १९६० पछि नेपाली समाजको सामाजिक–राजनीतिक संरचनामा ‘परम्परागत शक्तिहरू’ र ‘प्रगतिशील शक्तिहरू’ बीचको द्वन्द्वले आधुनिक संस्थागत संसदीय अवस्था जन्मियो । यसले सामाजिक–आर्थिक र राजनीतिक समावेशीकरणका अवधारणाहरूमा परिवर्तनका छालहरू आउन सुरु भएको देखिन्छ । प्राध्यापक हर्क गुरुङ लेख्छन्, नेपालमा यही समयमा ‘मानवीय पुँजी’ नै स्वतन्त्र वृद्धिको प्रमुख कारक तत्व हो भन्ने अवधारणा आयो । अर्थात् मानवीय मूल्य र मान्यतालाई प्रमुखतामा लिएर राजनीतिक असमानता, आर्थिक असमानता, शैक्षिक असमानता र सामाजिक रूपान्तरणको अवस्थालाई लिएर समावेशीकरण कसरी अगाडी लान सकिन्छ सोच्न सुरु गरियो, जुन कुरो विज्ञ अमरेत्य सेनले पनि विकास केन्द्रित मानवीय पुँजी र मानवीय क्षमता पनलाई उल्लेख गरेका छन् । यसै समावेशीकरणका क्रममा हाम्रो समाजमा रहेको जार काट्ने प्रथा, जारी तिर्ने प्रथा, छूवाछूतभित्रको बिटुलो जात (पानी नचल्ने) बिहेवारीको प्रथा खुकुलो, महिलाहरूको नाममा जग्गा पास गर्दा कर कम लाग्ने, अपाङ्गता भएकालाई भत्ता, समानुपातिकमा राजनीतिक सिट र ऐन, कानुन, नियमजस्ता विषयहरू बदलिँदै र नयाँ विकसित हुँदै आएको बुझ्न सकिन्छ ।
यी विषयहरू गहनतासाथ विज्ञहरूले, नेपालका नीतिनिर्माताहरूले र योजनाकारहरूले बुझ्नुपर्ने विषयहरू हुन् । तर, यहाँ केही साझेदारीमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी, पार्टीका नेतृत्व र दाताका उद्देश्य मुताबिक सामाजिक विखण्डनमा ‘तारा बाजी लैलै’ मा कुद्ने कार्यमा सरकार सहित सबै कुदिरहेको देखिन्छ ।
समावेशीकरणको विषय अहिले जन्मिएको होइन । यसलाई तराई र पहाड बस्ने केही जातजातिको स्वार्थ सिद्ध गर्ने वा फाइदा पुग्ने हिसाबले लिइनु हुँदैन ।
पूर्णतया दातामुखी अर्थतन्त्रमा, प्राकृतिक प्रकोप, जातीय छूवाछूत र गरिबीले पिल्सिएर कुदिरहेको नेपालमा कम्युनिस्ट सैद्धान्तिक धरातलले खुट्टो टेक्न पाएपछि सामाजिक भेदभावका विषयहरू विरुद्ध आवाजहरू उठ्न थालेको देखिन्छ । विश्व बहावसँगै हाम्रो मुलुकमा गरिबी निवारण कोष खडा भए पनि अहिलेसम्म अपाङ्गतासम्बन्धी विषयहरूमा खास सुधार भएको देखिँदैन । हाम्रो मुलुकमा बहिष्करणको कुरो गर्दा मूलतः छूवाछूतले नै जरो गाडेको छ । प्राकृतिक प्रकोपले र गरिबीले पहाडमा चपेटामा परेका जातजातिहरू, जातीको केही सानो समुदाय वा परिवारहरू बसाइँ सर्दा सीप, कला भएका व्यक्ति वा परिवारसँगै सारेको वा सार्न सहयोग गरेको देखिन्छ, जसलाई संस्कार, संस्कृतिका साथै मानवीय कोहेसिभ गाँठोको तान्ने बल हो भनेर बुझिन्छ ।
यसरी नै भारतबाट तराईमा छिरेका धनी ग्वालाहरू र जमिनदारहरू पनि हरुवा, चरुवा र लोहार परिवारलाई आफ्नो नजिक तान्ने कार्य गरेको देखिन्छ । पछिल्लो सन् १९९० पछिको दशकमा बजार केन्द्रित अर्थतन्त्रको विकासले पेसागत रूपान्तरणले गर्दा छूवाछूत घट्दै गएको देखिन्छ भने आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ । यसमा अझै आर्थिक रूपान्तरणको विषयवस्तुमा ध्यान पु¥याउँदा अतिरिक्त आम्दानीले मानवीय समावेशीकरणमा गुणात्मक सुधार गर्न सकिन्छ, मानवीय क्षमतामा विस्तारले बहिष्करण र समावेशीकरणमा सुधार गर्न सकिन्छ, मानवीय जीवन दैनिकी सुधारको लागि नीति निर्माण र सामाजिक–राजनीतिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ । साथै, शैक्षिक रूपान्तरणतर्फ ध्यान पु¥याउँदा समावेशीकरणको प्रतिदर–रेट बढाउन समुदाय वा समाजमा सकिन्छ ।
प्रसङ्ग बदलौँ, विज्ञ जोक यंग (सन् १९९९) ले बहिष्करणलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेका छन् । पहिलो, श्रम बजारमा हुने आर्थिक बहिष्कार, नागरिक समाजमा व्यक्तिहरूबीचको सामाजिक बहिष्कार र फौजदारी न्याय प्रणाली र निजी सुरक्षाको लगातार विस्तार हुने बहिष्करण गतिविधिहरू भनेर उल्लिखित गरेका छन् ।
नेपालकै सन्दर्भमा यी अवधारणाहरू भूमण्डलीकरणको बहावसँगसँगै, प्रजातान्त्रिक पैताला लिएर छि¥यो, जसले गर्दा, नेपाल सरकारले गरिब र पिछडिएका समूहहरूलाई विकास प्रयासहरूमा मूल वाहकका रूपमा सहभागिता गराई बहिष्करणमा परेका समुदायहरूलाई विकासको मुलप्रवाहमा ल्याउन एक विशेष तथा लक्षित कार्यक्रमको रूपमा सन् २००३ मा गरिबी निवारण कोषको स्थापना ग¥यो । लिङ्ग, जात, जातीयता तथा भौगोलिक अवस्थाका कारणले बहिष्करणमा परेका समूहहरूप्रति विशेष ध्यान दिँदै ग्रामीण गरिबहरूको बसोबासको अवस्था र जीवनचर्यामा सुधार तथा सशक्तीकरण गर्ने प्रयास गर्ने उद्देश्य राख्यो । गरिबी न्यूनीकरण रणनीति पेपर (पीआरएसपी) का चार स्तम्भमध्ये एकका रूपमा नीतिगत मुद्दालाई समावेशीकरणका रूपमा मान्यता दिएपछि यो मुद्दाले पर्याप्त लाभ उठायो जुन नेपालको दसौँ योजनामा पनि उल्लिखित छ ।
अन्य विकास बहाव सरह संसारमा आएका नीति, एप्रोचदेखि कार्यक्रम सहयोग दाताबाट पाइन्छ भने त्यो हालिहाल्ने, भेटेसम्म खाई हाल्ने हाम्रो प्रवृत्ति मुताबिक यो गरिबी निवारण कोष विश्व बैङ्क र आईएफएडीको सहयोगमा सुरु गरी हालेका छौं जसमा सम्पन्नताको तह निर्धारण (जस्तै ः तीन महिनाभन्दा कम अवधिका लागि खान पुग्ने घरधुरी, अति गरिब घरधुरीहरूको वर्गीकरण आदि) र दलित भनी पहिचान भएका जात समूहहरू भनी विस्तृत अध्ययन नगरी सुरु गरेको देखिन्छ । विस्तृत अध्ययन नगरेको भए पनि राखेका उद्देश्यहरू राम्रा देखिन्छन् भने कार्यान्वयन अभ्यासमा लथालिङ्ग देखिन्छ बरु हामीले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर लबियिंग र बार्गेनिङको साधन बनाई जुन आफ्ना गल्ती छोप्ने यो सजिलो बाटो समाउन हामी सिपालु भएका छौं ।
नेपालमा अहिले बहिष्करणमा रहेका तर समावेशीकरणतर्फ डोर्‍याउनुपर्ने वर्गीकरण गर्दा :
१. गरिबीको रेखामुनि रहेका घरधुरीहरू,
२. तराई, पहाड र हिमाली भेग भूगोल विभाजनमा जात जातीय र लैङ्गिक विभाजनभित्र बोर्डरछेउमा बसोबास गर्ने, सहरमा बसोबास गर्ने र गाउँमा बसोबास गर्ने छुट्ट्याउनुका साथै पानी चल्ने र नचल्ने आदि सामाजिक रूपान्तरणको हिसाब जोड्नुपर्ने देखिन्छ ।
३. उछिट्टिएका समुदाय : राउटे र चेपाङ आदि जस्ताका साथै सगाृत्रीय बिहेबारी गरेका र एका घरका भाउजू, बैनी आदि लिएर भाग्नेहरू जसलाई समाजले लगारेको पनि देखिन्छ ।
व्यक्ति र वरिपरिका चिजबीज समुदायको केन्द्रीय तत्व हो, जसलाई ‘बनावटी’ रूपले कानुनी अनुष्ठान र संस्थागत सम्बन्धहरूले बाँधिएको हुन्छ । भूगोलमाथि मानिसले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापहरू गर्छ । यहाँ बनावटी भन्नासाथ धनी, गरिब, सांस्कृतिक रूपमा विशिष्ट तहहरू, हाम्रा दैनिक अभ्यासहरूजस्ता तत्वहरू पर्छन् । यसलाई कानुनी प्रविधि, औपचारिक र अनौपचारिक संस्थाहरूद्वारा परिचालन गरिन्छ ।
(न्यौपाने ‘नेपालको संघीयता र राजनीतिक–आर्थिक बहाव’ पुस्तकका लेखक हुन् ।)
भारत सकारको आ.व. २०२०÷२१ का लागि फेब्रुअरी १ का दिन केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले ३ लाख ४ हजार २ सय २३ करोड भारुको बजेट सार्वजनिक गरेकी छन्, जसमध्ये भारतको कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रमहरूका लागि २८ खर्ब ३० अर्ब भारु विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ९ प्रतिशतभन्दा धेरै हो, जसको मूल उद्देश्य सन् २०२२ सम्ममा किसानको आय दोब्बर गर्ने रहेको छ । सीधा र प्रत्यक्ष आर्थिक सम्बन्ध तथा खुला सिमानासहितको छिमेकी देशमा हुने आर्थिक गतिविधिहरूको नेपाली अर्थतन्त्रमा स्वाभाविक रूपमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गर्छ ।
सन् २०२२/२३ सम्म माछा उत्पादन २ करोड मेट्रिक टन पुर्‍याउने र सन् २०२४÷२५ सम्ममा सागरमित्र तथा माछा उत्पादक संस्थाहरूमार्फत सञ्चालन हुने मत्स्यपालन प्रसार कार्यक्रमहरूको प्रवद्र्धनबाट आगामी आ.व.मा थप १८ हजार २ सय हेक्टरमा माछापालन विस्तार गरी सन् २०२४÷२५ भित्र १० खर्ब भारुबराबरको माछाजन्य निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ ठूलो मात्रामा अनुदान तथा बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव पनि भारतको बजेटले गरेको छ । आगामी पाँच वर्षमा माछा निर्यात १० खर्ब भारुबराबर पु¥याउने लक्ष्य भारतले लिएको छ । गत आव २०७५÷७६ मा करिब २ अर्बबराबरको माछा भारतबाट आयात भएको थियो । भारत सरकारको यो योजनाबाट नेपालको मध्य र पश्चिम तराईमा फस्टाउँदै गरेको मत्स्यपालन क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपाल सरकारले थप ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपनाका साथ कृषिक्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको नेपाल सरकारले हाल यस क्षेत्रको विकासका लागि विनियोजन गरेको रकम कुल बजेटको ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, जुन ज्यादै न्यून हो । हाल नेपाल सरकारले कृषकलाई प्रदान गरेको अनुदानको दरसमेत भारतलगायतका नेपालसँग सीधा आर्थिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूको तुलनामा ज्यादै न्यून छ । न्यून लगानी र नारामा मात्र सीमित प्राथमिकताले नेपालको कृषिक्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई यसबाट राष्ट्रिय पुँजी विकासमा योगदान पु¥याउने बाटो कठिन प्रायः देखिन्छ । कृषिक्षेत्रमा राज्यको तर्फबाट हुने लगानी वृद्धि गर्ने, अनुदानलाई प्रतिफलमुखी बनाउने, प्रतिस्पर्धी बाली तथा वस्तुको प्राथमिकीकरण गरी तिनलाई औद्योगीकरणसँग जोड्ने, निजी क्षेत्रलाई कृषिजन्य उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने किसिमका योजना तथा कार्यक्रमहरू बनाई हाम्रो कृषिक्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नु एकमात्र विकल्प हो ।
राष्ट्रियता र विकासमा नेपाली सेना
नेपाल राष्ट्रको अखण्डता, स्वाधिनता र सार्भभौम नेपाली जनताको आस्थाको वैभव र गौरवको पहिचान र धरोहरका रुपमा नेपाली सेनाले आफ्नो भूमिकालाई कायम राख्ने दिशामा अघि बढ्न सक्नुपर्दछ । नेपालको इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा मुलुक र जनताको स्वाधिनता र स्वतन्त्रताको अक्ष्क्षुणताका अभियानमा नेपाली सेनाको भूमिका गौरवपूर्ण र चीरस्थायी रहेको छ । इतिहासका सर्वकालिक सास्वत्त यही हो कि नेपाली सेनाले आफ्नो पहिचान विशुद्ध व्यावसायिक संस्थाका रुपमा कायम गर्न सक्नु आफैंमा महत्वको छ । इतिहासका घटनाक्रममा राजनीतिक परिवर्तन र जनताका उभारको प्रतिकात्मक व्यवस्थापकीय रुपान्तरणमा नेपाली सेनाले आफ्नो मौलिक व्यावसायिकता र जनभावनाको मुल्यलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्न सक्नु यस संस्थाको उत्कृष्ट पहिचान हो, जनताको आस्थाको केन्द्रमा रहन सक्नुको थप पुष्टि हो ।
बहुआयामिक भूमिकामा नेपाली सेना :
नेपाली सेनाका भूमिकालाई बहुआयामिक कोणबाट हेर्न सकिन्छ । नेपाली सेनाको भूमिकालाई खोज्ने सवालमा राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना कार्य, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण विशेषतः राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षणक्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार विकासअन्तर्गत राजमार्ग तथा सडक निर्माणका कार्य, प्राकृतिक प्रकोप न्यूनिकरण र व्यवस्थापन तथा प्रकोपका समयमा तत्काल उद्धार तथा राहतका कार्य, विभिन्न मानवीय तथा सामाजिक सेवाका कार्यलाई उदाहरणीय कार्यका रुपमा लिन सकिन्छ । विपद् तथा आपतकालिन कार्यमा सेनाले आफ्नो भूमिकालाई अझ गहन र प्रभावकारी गराउनु अवश्यक छ । विश्व शान्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले अघि सारेको राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनको एक भरपर्दो सहयोगी राष्ट्रका रुपमा नेपालले उल्लेख्य कार्य गरी आएकोछ ।
विश्व शान्ति स्थापनाको अभियानमा नेपाली सेना :
विगत छ दशकको इतिहासलाई हेरेको खण्डमा विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रहरुमा शान्ति स्थापना कार्यका क्षेत्रमा नेपाली सेनाको महत्वपूर्ण भूमिका र योगदान रही आएको छ । विश्व शान्ति तथा स्थायित्वका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत अफ्रिकी द्वन्द्वग्रत राष्ट्र दक्षिणी सुडानको रोम्बेकमा खटिएको नेपालको शान्ति सेनालाई शान्ति स्थापनाको क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेवापत संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति अभियान अन्तर्गत राष्टसंघीय पदक प्राप्त हुनु नेपाली सेनाको मात्र नभई नेपालकै उच्च मूल्यांकन भएको सबैले अनुभुति गरेका छौं । यो आफैंमा एक महत्वपूर्ण आयाम पनि हो । सन् १९५८ मा लेवनानमा शान्ति स्थापनाका लागि सानो मिसनमा सहभागी भए पछि नेपालले संयुक्त राष्टसंघीय शान्ति स्थापनाको कार्यमा नेपाली सेनाले निरन्तर सहभागिता र योगदान पुर्‍याउँदै आएकोछ । हालसम्म विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रत तथा युद्ध भएका ४२ वटा शान्ति स्थापना मिसनमा नेपाली सेना सहभागी भइ सकेकोछ भने एक दर्जनभन्दा बढि द्वन्द्वग्रत स्थानमा राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन अन्तर्गत सेवा प्रदान गरी आएकोछ ।
राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना कार्यमा संलग्न रही आएका विश्वका विभिन्न मुलुकका सेनामा नेपाली सेनाको योगदानका हिसावले छैठौं स्थानमा रहेको छ । तर नेपालले ििवश्व शान्तिका लागि संयुक्त राष्टसंघले अघि बढाएको शान्ति मिसनमा जुन गुणात्मक योगदान पुर्‍याएको छ त्यसको वावजुत नेपालले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेतृत्वदायी भूमिकालाई अझ गहनताका साथ निर्वाह गर्छ भन्ने कुराको उद्वोध राष्ट्रसंघमा हुन सक्नुपर्दछ र यसमा हाम्रो असल कुटनीतिक पहल आवश्यक छ ।
प्राकृतिक प्रकोप न्यूनिकरण र विपद् व्यवस्थापनमाः
प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन तथा प्रकोप पश्चात तत्काल उद्धार तथा राहतका कार्य लगायत मानवीयता तथा सामाजिक सेवाका कार्यलाई उदाहरणीय कार्यका रुपमा लिन सकिन्छ । पछिल्लो समयमा वि.सं. २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पमा उद्धार तथा राहतका तात्कालिक कार्य, बारामा विनासकारी आँधीपिडित जनताको उद्धार तथा पुर्नस्थापना लगायता बर्षेनी आउने बाढी पहिरो ।, हिमपहिरो लगायतका प्राकृतिक विपद्का समयमा नेपाली सेनाको उल्लेख्य कार्यका रुपमा लिन सकिन्छ । यस्ता विपद् तथा आपतकालिन अवस्थामा उद्धार, राहत वितरण तथा तात्कालिक अवस्थामा अस्थायी सिविरमा पिडितको आपत्कालिन वसोवासका लागि देशमा घटेका विभिन्न समयका भुकम्प, बाढी पहिरो, हिमपात, हवाई दुर्घटना लगायतका बग्रेल्ती प्राकृतिक प्रकोपमा उदाहरणीय कार्य गरी आएको सन्दर्भमा यस्ता प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न अझ व्यावसायिक तथा कार्यकुशलता आवश्यक छ । प्रकोप न्युनिकरण र सचेतनाका पाटाहरुलाई अन्य सरोकारवाला निकायको सहकार्यमा समन्वात्मक ढंगबाट अघि बढाउन सकिएको खण्डमा जोखिम न्युनिकरण र मानवीय क्षतिलाई निकै हदसम्म कम गर्न सकिन्थ्यो ।
प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापनमा :
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षणक्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको महत्वपूर्ण भूमिका रही आएकोमा कसैको दुईमत छैन । देशका सबै राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रहरुको संरक्षणको गहन जिम्मेवारी विगतको लामो समयदेखि नेपाली सेनाले लिई आाएकोछ । पर्यापर्यटन र लोपोन्मुख वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरुको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी आर्थिक विकास र पर्यटनक्षेत्रको संस्थागता विकासमा साझेदारी भूमिका रही आएको सन्दर्भमा दिगो विकास र संरक्षण अभियानमा अझ प्रभावकारीरुपमा सेनाले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्नुपर्दछ । दीगो विकास र वातावरण संरक्षणका दिशामा नविनतम आयामहरुको उद्वोध भई सन्तुलित र वातावरणमैत्री मानवीय विकासका आयामलाई अझ मुखरित गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुन्जका चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज नेपालको पर्यापर्यटनको सबैभन्दा उत्कृष्ट गन्तव्यस्थलका रुपमा विकास भई आएकोछ । साथै वर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज, लाङ्टाङ् राष्ट्रिय निकुन्जका पर्यापर्यटन र पदयात्रा पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा रहेकाले यसको साख र पर्यटकीय आकर्षणलाई अझ गुणात्मक फड्को मार्ने सन्दर्भमा संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगका सवालमा जीवजन्तुमैत्री प्राकृतिक वातावरण बनाउने दिशामा सबैको सहकार्य आवश्यक छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल र पर्यटकमैत्री बनाउने अभियानमा सहकार्य नितान्त महत्वको विषय हो ।
पूर्वाधार निर्माण र विकासमाः
नेपाली सेनाको भूमिकालाई विकास र निमार्णसंग पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ नै । नेपाली सेनाले देशको भौतिक पूर्बाधार विकास र निर्माणका क्षेत्रमा राजमार्ग, सडक तथा पुलहरुको निर्माणका कार्यमा विगतको लामो समयदेखि उल्लेख्य योगदान पुुर्याउन सकेकोछ । प्रारम्भिक समयमा त्रिशुली सोमदाङ् सडक निमार्णका अभियानसंगै अघि बढेको सेनाको सडक निमार्णको अभियान अझ व्यापक र परिमार्जित भएकोछ । पछिल्लो समयमा काठमाडौं तराई द्रुतमार्गको निमार्णको कार्यसम्म आइपुग्दा यस क्षेत्रमा सेनाको कार्य निपुण व्यावसायिक तथा गुणस्तरीय पनि हुन सकेकोछ । देशका अतिविकट तथा कठिन भौगोलिक अवस्था र भौगर्भिकक्षेत्रमा सडक निर्माणको चुुनौतीपूर्ण कार्यमा नेपाली सेनाले काम गरेकोछ ।जसको उदाहरणका रुपमा कर्णाली राजमार्गको निमार्णलाई लिन सकिन्छ । कर्णाली प्रदेशका अधिकांश विकट र विकासका अवसरबाट राज्य र प्रकृतिबाटै हेपिएका जनताको जीवनरेखा र समग्र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा यस्ता राजमार्गको निमार्ण र संचालनले विकास र एकतालाई जोड्ने दिशामा सेतुको काम गर्न सक्छ । अवको सरोकार र चासो विकास र आर्थिक कार्यकलापलाई त्यसक्षेत्रका जनताको आवश्यकतासंग जोड्नु र योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनुमा राज्यसंचालकको प्राथमिक दायित्व हो । यसका साथै अन्य विकास निर्माण कार्यमा भूमिकालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु नै हो ।
नेपाली सेनाले २६ सडक आयोजनाको निर्माण (ट्याक खोल्नेकार्य) कार्य सम्पन्न गरिसकेकोछ भने ती आयोजना सम्पन्नतासंगै राष्ट्रिय सडक संजालमा एक हजार ४८ किमी थप सडक निर्माण सम्पन्न भएकोछ । देशका अतिविकट भौगोलिक क्षेत्रमा पर्ने सुर्खेत—जुम्ला, नाग्मा—गमगढी, बेंसिसहर—चामे, बाग्लुङ—बेनी—जोमसोम, जोमसोम—कोरला, छिन्चु—जाजरकोट, सल्यान—मुसिकोट, अबुवा—भच्चेक सडक निर्माण सम्पन्न हुनुको श्रेय सेनाका कार्यलाई जान्छ । यस्ता कार्यले समग्र देशको भौतिक पूर्वाधार विकासमा आमुल परिवर्तन र जनताको निम्नतम आवश्यकता परिपूर्तिका दिशामा थप टेवा दिन्छ भने सन्तुलित प्रादेशिक विकासलाई मद्द पुग्नेछ ।
आन्तरिक सुशासन र वित्तिय पारदर्शिताः
आन्तरिक सुशासन र पारदर्शिता सबै संगठीत संस्थाको प्राथमिक आवश्यकता हो । केही समयअघि संसदीय समितिमा सेनाभित्र अनियमिता र भ्रष्टाचारको प्रबृत्ति रहेको विषयले प्रवेश पाएको सन्दर्भमा यस विषयलाई सैैनिक मुख्यालयमा उच्चअधिकारीले समेत नियन्त्रण र पारदर्शिताको विषयलाई उच्च महत्व दिएर उठान गरेकाछन् । सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले गते भदौ २४ गतेका एक वर्षीय कार्यकालको समिक्षामा सेनाभित्रका वित्तिय अनुशासन र आर्थिक पारदर्शिताका सवालका पेचिला विषय उठान गरीनुबाट सेनाको समग्र व्यवस्थापन र सुशासनमा देखिएका विसंगती र विकृतीलाई रोक्न ठोस तथा प्रभावकारी कार्य आवश्यक छ ।
पछिल्ला समयमा नेपाली सेनाले संस्थागत व्यावसायिकताको मुल्य मान्यता भित्र रही आर्थिक तथा व्यावशायिक कार्य र उपार्जनका कार्यमा ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने कुरामा जनसरोकार रही आएकोछ । विशेषतः सैनिक कल्याणकाारी कोषको रकमको यथोचित उपयोगका सन्दर्भमा कल्याणकारी भाव तथा सामाजिक उत्तरदायित्वका तत्वलाई प्राथमिकतामा कार्यक्रम र योजना अघि बढाउन सकिएमा अझ प्रभावकारी हुनसक्ने थियो । सेनाका विशुद्ध सैनिक व्यावसायिक चरित्र र यस संस्थाको गरिमालाई कायम गर्ने सन्दर्भमा उच्च महत्व दिनु सक्नुमा सम्बन्धित निकायको व्यवस्थापकीय ध्यान र जिम्मेवारी आवश्यकताको जनताले अपेक्षा गरेका छन् ।
नेपाली सेना नेपाली जनताको आस्था र भरोसाको केन्द्रमा रहेर यसले देश र जनताका लागि अझ धेरै उदाहरणीय कार्य गर्नेछ । विश्व शान्ति र स्थायित्व तथा मानवतावादी विश्वसमाजको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको अभियानको एक महत्वपूर्ण हिस्साका रुपमा नेपाली सेनाको शान्ति स्थापना कार्यमा थप योगदानलाई परिपोषण गर्ने दिशामा संकल्पित रहन सक्नेमा विश्वस्त रहन सकिन्छ । राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधिनताका लागि नेपाली सेनाको गौरवशाली परम्परा भोलीका दिनमा प्रभावकारी र गुणात्मक हुनुमा आशाबादी रहन सकिन्छ ।
शिक्षितसमेत मानव बेचबिखनको फन्दामा परेका छन् : केशर विश्वकर्मा (अन्तर्वार्ता)
कपिलवस्तु : गोरखा जिल्लामा न्यून वर्गीय परिवारमा जन्मिएका केसर विश्वकर्मा सानै देखि सामाजिक सेवामा रुची भएका एक सरल स्वभाव र मिलनसार व्यक्ति हुन् । करिब एक दशकदेखि मानव बेचबिखनविरद्धको अभियानमा आवद्ध विश्वकर्मा आफन्त नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाका कपिलवस्तु जिल्ला संयोजक हुन् । मानव बेचबिखनको भयावह अवस्था र यसको नियन्त्रणका विषयमा मध्यान्ह संवाददाता इमरान खानले संयोजक विश्वकर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश -
मानव बेचबिखन भन्नाले के बुझिन्छ ?
मानव बेचबिखन भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले मानिसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बेचबिखनको उद्देश्यका साथ लगि बेचबिखन गर्नुलाई मानब बेचबिखन भनिन्छ । चाहे यो आन्तरिक पनि हुन सक्छ , बाह्य पनि हुन सक्छ । चाहे त्यो श्रम शोषण हुन सक्छ, यौन शोषण शरिर बन्दक वा कुनै अङ्ग बेचबिखनको उद्देश्य नै किन नहोस ।
मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा लामो समय आवद्ध हुनुभयो । पहिले र अहिलेमा के फरक पाउनु भएको छ ?
सुरुमा महिला मात्र बेचबिखनमा पर्छन् भन्ने मात्रा थियो जसमा चेलिबेटि बेचबिखन भनिन्थ्यो पछि यो बिस्तारै पुरुषहरुलाई पनि विभिन्न प्रयोजनका लागि बेचबिखन भएका तथ्यहरु बाहिरियो र मानव बेचबिखन भएको पाइन्छ । सुरुमा मैले बुझ्दा भारतको विशेष बम्बईमा महिलालाई लगेर बेचबिखन गर्नु हो भन्ने बुझाई थियो । तर त्यसमा धेरै फरक रहेको छ अहिलेको सन्दर्भमा देश भित्रैका शहरहरुमा किन नहोस् वा भारतका विभिन्न शहर लगायत तेस्रो मुलुकमा समेत बेचबिखनमा परेका कयौं घटनाहरु बाहिर आएका छन् । यो अत्यन्त दु:खद कुरा हो ।
कस्ता खालका ब्यक्तिहरु बढी बेचबिखन पर्दछन् वा सम्भावना हुन्छ ?
मेरो ८ वर्षको यात्राामा मैले देखेको र साधारण बुझ्दापनि प्राय शिक्षाबाट बन्चित ब्याक्तिहरु जो जोखिमको विषयमा जान्न सक्दैनन, बेरोजगारको चपेटामा परेकाहरु जहाँ रोजगार पाउने आशामा भौतारिदै गर्दा गलत ब्याक्तिहरुको पहुँचमा पुग्दछन् । कयौं ब्याक्तिहरु साहारा पाउने आशामा विश्वासका कारण त्यो अवस्थामा पुग्दछन् । सामान्य बुझ्दा चेतनाको कमी, अशिक्षा, गरिबी, सामाजिक अपहेलना भएका पर्दछन् भने कयौं शिक्षित ब्यक्तिहरु पनि यसबाट अछुतो रहेका छैनन् ।
तपाईंले काम गर्दै गर्दा उद्धार गरिएका त्यस्ता उदाहरण दिनु पर्दा ?
मैले काम गर्दै गर्दा सयौं चेलीहरु जो बेचबिखनको जोखिमबाट उद्धार गरिएको छ । जसमा कसलाई उदाहरण दिउँ भन्ने म आफैं कन्फ्युज भएको छु । धेरै उद्धार गरिएका चेलीहरु जो आज आफन्त नेपालले सम्मानजनक जीवन जिउन सक्ने बनाएको छ । कयौं चेलीहरु जो साहारा विहीन थिए, बेचबिखनको सिकारमा थिए उनीहरुको जीवनमा आमुल परिवर्तन आएको छ । यहाँलाई भन्नु पर्दा म विराटनगरमा रहँदा, झापामा रहँदा त्यस्ता चेलीहरुलाई उद्धार गरिएको थियो जसको अवस्था देख्दा र सुन्दा म धेरै पटक रोएको छु । १४ / १५ वर्षका साना किशोरीहरु बेचबिखनको कहाली लाग्दो पारीबेशबाट उद्धार गरी अहिले आफन्त नेपालको संरक्षणमा रही खुशी र समाजलाई नै सचेत बनाउन सक्ने भएको देख्दा गर्व लाग्छ । यहीँ कपिलवस्तुमा रहँदै गर्दा दाङ, प्युठान, कपिलवस्तु लगायतका धेरै चेलीहरुलाई उद्धार गरी दर्जनौं त्यस्ता ब्याक्तिहरुलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सफल भएका छौं । कयौं चेलीलाई संस्थाले नै संरक्षण दिई उच्च शिक्षा दिइएको छ । ती चेलीहरु देख्दा धेरै ठुलो काम गरेको अनुभव हुन्छ । तर अझै गर्नु पर्ने धेरै छ ।
यस्तो काम गर्दा कत्तिको जोखिम आउन सक्छ ?
जोखिमको त कुरा नगरौं । यो आफैंमा सम्बेदनशिल कार्य हो । खुशी के लाग्छ भने सत्यको बाटो हिँड्दा कमजोर होइँदैन र राम्रो कामको लागि सबैको साथ सहयोग पाइन्छ ।
स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय सरकारको सहयोग कस्तो पाउनुभएको छ ?
वास्तवमा यो काम राज्यकै लागि गरिएको अभियान भएको कारण स्थानीय प्रशासनले सहयोग नगर्ने कुरै छैन, राम्रो सहयोग छ । स्थानीय सरकारले कृष्णनगरको हैसियतमा हेर्दा अत्यन्त राम्रो गरेको छ । सुरुदेखि महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कृष्णनगर नगरपालिकाको सराहनीय भूमिका रहेको छ ।